देउवाको भविष्यबाणी गर्ने ज्योतिषीको सामाजिक सञ्जालमा चर्चा, को हुन भविष्यबाणी गर्ने ज्योतिषी ? Canada Nepal
काठमाडौं - नेपाली कांग्रेसका प्रभावशाली नेता शेरबहादुर देउवाको नेपाली राजनीतिमा पुनः चर्चा चुलिएको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको प्रतिनिधि सभा बिघटन गर्ने निर्णय अदालतले खारेज गरेपछि राजनीति वृतमा फेरि अनेकन आकँलन हुन थालेको छ ।
ज्योतिष तथा वास्तुविद सुरेश चन्द्र रिजालले पुन:देउवाको पालो आएको बताएका छन् । क्यानडा नेपालसंग कुरा गर्दै उनले भने,’अब प्रधानमन्त्री बन्ने पालो नेपाली काँग्रेसका सभापति शेर बहादुर देउवाकै हो ।’
२०७४ साल मंसिरमा रिजालले गरेको भविष्यबाणीलाई नै आधार मानेर देउवाले निर्वाचन पछि पुनः आफु नै प्रधानमन्त्री हुने भन्दै नेपाली जनतालाई बहुमत दिन आग्रह गरेका थिए । उक्त कुराले निक्कै चर्चा समेत पाएकाे थियाे । अहिले भविष्यबाणी गर्ने ज्याेतिषीकाे पनि उत्तिकै चर्चा र सामाजिक सञ्जालमा निक्कै खाेजी भइरहेको छ ।
तीन बर्ष अघि नै ज्याेतिषीले पुनः प्रधानमन्त्री बन्ने याेग रहेकाे भनेर भविष्यबाणी गरेकाे कुरा यतिबेला सत्य साबित हुन लागेकाले देउवाले राजनैतिक भेटघाटलाई तिब्र पारेका छन् । भने ओली समुहले उक्त भविष्यबाणी गर्ने ज्याेतिषीलाई कडा निगरानीमा राखेकाे स्राेतले जानकारी गराएकाे छ ।
हाल दक्षिण एसियाली ज्याेतिष महासंघ नेपालका महासचिव सुरेश चन्द्र रिजालले नेता देउवाको ग्रह राशि तथा नक्षत्र केलाएर भविष्यबाणी गरेका थिए ।
२०७४ मा भविष्यबाणी गर्दा उनले निक्कै आलोचना खेप्नु परेको समेत रिजालले बताए । नेपालकाे पछिल्लो राजनीति देउवाको वरिपरि घुमेकाले पुनः देउवा प्रधानमन्त्री बन्ने लक्षण देखिएपछि भविष्यबाणी गर्ने ज्याेतिषीकाे चर्चा चुलिएको हाे । यतिबेला उनलाई फाेन तथा भेटेर बधाई दिइरहेका छन् । शास्त्रीय प्रमाणमा बाेलेकाले शास्त्र जहिले पनि सत्य नै हुने उनकाे दावी छ ।
यतिबेला विभिन्न पार्टीका नेता तथा कार्यकर्ताले ज्याेतिषीलाई पटकपटक टेलिफोन मार्फत सम्पर्क गरिरहेकाे पारिवारिक स्राेतले बतायो । रिजाल अदालतले फैसला सुनाए देखि ब्यस्त छन् ।
फाल्गुण १२, २०७७ बुधवार १५:११:५७ बजे : प्रकाशित
पाथीभरा माताले तपाईको मनोकामना पूरा गरुन् ! हेर्नुहोस् चैत्र २६ गते बिहिबारको राशिफल
चैत्र २६, २०७७ बिहिवार ०७:१०:१६ बजे : प्रकाशित
भगवान मुक्तिनाथले तपाईको मनोकामना पूरा गरुन्, हेर्नुहोस् चैत्र २५ गते बुधबारको राशिफल
चैत्र २५, २०७७ बुधवार ०७:०१:५९ बजे : प्रकाशित
गणेश भगवानले तपाईको मनोकामना पूरा गरुन्, हेर्नुहोस् चैत्र २४ गते मंगलबारको राशिफल
मेष राशि - सामाजीक कार्यका क्षेत्रमा सहभागीता जनाउने अवसर प्राप्त रहनेछ । परीश्रम अनुरुपको फल प्राप्ती हुने समय रहेकोछ । सभासम्मेलन जन्य कार्यका क्षेत्रमा मान सम्मान प्राप्तीको योग रहेकोछ । मनोरञ्जनका क्षेत्रमा समय ब्यतित रहेनछ । पारीवारिक झोर झमेलाको सामना गर्नु पर्ने समय रहेकोछ ।
मिथुन राशि - शारीरिक आलस्यातले गर्दा गरीरहेको काम को क्षेत्रमा अपजस सहनु पर्ला । सोचेको भन्दा बढिमात्रामा खर्च हुनाले मानसिक चिन्ता उत्पन्न हुनेछ । आम्दानि मध्यम रहेता पनि बोलिको कारण साधारण दुर्घटनाको सम्भाबना रहेको छ । नजिकका ब्यक्तिहरुको साथ छुट्नाले सहकार्यमा झन्झट ब्यर्होनु पर्नेछ ।
कन्या राशि - आय आर्जनमा बृद्यि गर्नका लागि तपाईले बढी परीश्रम गर्नु पर्न सक्छ । बौधिक क्षेत्रको बिकाशले तपाईको मान सम्मानमा बृद्यि गर्नेछ । आफु भन्दा सानाको सहयोगमा गरिएको कार्यह? सफल रहनेछन । बौधिक ब्यक्तित्व सगँको सामिप्यता आगामी दिनलाई मार्गदर्शन बन्नेछ ।
धनु राशि - आफन्तजन बिचको भेटघाटले मन प्रशन्न रहला । मित्रहरुको साथ सहयोग बाट बिग्रन लागेको काममा सफलता प्राप्त हुनेछ । स्वास्थमा आएको खराबिले कार्यमा ढिलाई उत्पन्न गराउनेछ । सामान्य बादबिबादको चक्करकाट्नु पर्नेछ । अ?को अनुशरणले तपाईलाई समान्य झन्झट वा अपजस दिलाउन सक्नेछ ।
मकर राशि - परीवारका कोहि सदस्यह?को स्वास्थमा खराबी आउन सक्नेछ । मान प्रतिष्ठामा बृद्यि हुने योग रहेको छ । मनमा आट र शाहस को कमिले कार्य सम्पादनमा झन्झट ब्यहोर्नु पर्ला । जिबन साथीको सहयोगले ब्यापार ब्यवसायमा सुधार आउनेछ । सहि निर्णय हुन नसक्दा परिबारीक कलहको सामाना गनुपर्नेछ ।
कुम्भ राशि - शत्रु सबल रहनाले कुराकाट्ने ब्यक्तिहरुको बृद्धि हुनेछ । सामान्य आर्थिक अभाब झेल्नु पर्ला । मनोबिलासिताका सामानह?मा सामान्य खर्चहुन सक्ने सम्भाबना रहेको छ । अनावश्यक खर्च नियन्त्ररण गर्न गारो हुन सक्ला । आफ्नु प्रिय ब्यक्ति सगँको बियोगले मन नि?त्साहित रहला ।
मिन राशि - यात्रा फाईदा मुलक हुनसक्ने सम्भाबना रहेको छ । आय आर्जनको लागी राम्रो समय रहेता पनि सामान्य खर्च हुन सक्छ । नयाँ मित्र सगँको भेट वा प्रिय खबरले मन प्रशन्न रहनेछ । आम्दानी बृद्यिका लागी बीद्योत ब्यक्तित्वह?को मार्गदर्शन अबलंबन गर्नु लाभदाइक रहला । आय आम्दानिका क्षेत्रमा जुट्ने समय रहेकोछ ।ज्यो.प.सरोज घिमिरे
चैत्र २४, २०७७ मंगलवार ०७:०९:५८ बजे : प्रकाशित
माता मनकामनाले तपाईको मनोकामना पूरा गरुन्, हेर्नुहोस् चैत्र २३ गते सोमबारको राशिफल
चैत्र २३, २०७७ सोमवार ०६:५०:३९ बजे : प्रकाशित